सेक्सका लोकप्रिय आसनः जुन महिलालाई असाध्यै मनपर्छ ! -
सेक्सका लोकप्रिय आसनः जुन महिलालाई असाध्यै मनपर्छ !
सेक्सप्रति महिलालाई पनि उत्तिक्कै रुचि, जति पुरुषलाई हुन्छ । तर सेक्सका क्रममा महिलालाई मन पर्ने आसनको बारेमा पुरुषले ध्यान दिंदैनन् । संसर्ग दुवैको सहमतिमा तर सन्तुष्टि पुरुषको भागमा मात्र हुंदा सुखमय यौन जिवनमा फाटो आउन सक्छ।
त्यसैले महिलाको सन्तुष्टि प्रति पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । महिला आफ्नो मन पर्ने आसनलाई दवाएर भएपनि पुरुषले मन पराउने आसनमा सम्भोग गर्न तयार हुन्छन्। तर अब पुरुषले पनि महिलालाई मन पर्ने आसनका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ।
दुवैले उत्तिकै चरमसुख पाउने गरि सम्भोग भएमा तपाईंको यौन जिवन जहिले पनि सुखमय हुन सक्छ । महिलाले मन पराउने उत्कृष्ट पांच आसन तल उल्लेख गरिएको छ।
१ डगि आसन: महिला हुरुक्कै हुने यो आसनमा पुरुषले महिलाको पछाडी भागबाट सेक्स गर्दा रमाइलो मान्छन् । जसले गर्दा महिलाको यौन अंगमा पर्याप्त घर्षण हुन्छ ।सम्भोगका बेला यो आसनमा महिलालाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ । यो आसनमा महिलाले चाहने लोकप्रिय आसन हो ।
२ आंखा जुधाएर गरिने आसनः महिला र पुरुषमा यो आसन सामान्यतया परिचित आसन हो । अल्छिलाग्दो भएपनि सामान्यतथा सम्भोगको सुरुवात यही आसनबाट हुने गर्दछ।
आधुनिक महिलामा यो आसन लोकप्रिय मानिन्छ । महिलाले यो आसनका क्रममा यौन साथीसंग आंखा जुधाउंन पाउंदा धेरै सन्तुष्ट हुन्छन् ।
३ काउगर्ल आसनः यो आसन महिला पुरुषको उत्तेजनालाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउने आसन हो । सम्भोगका समयमा महिलाले पुरुषलाई जिस्काउन मन पराउंछन्।
महिला यो आसन अन्र्तगत पुरुषको शरीर माथि बसेर उफ्रीन मन पराउंछन् । महिलाको क्रियाकलाप बढि हुने यो आसनमा पुरुषको भुमिका निक्रिय जस्तै हुन्छ । महिलाले आफ्नो इच्छा पुरुष यौन अंग खेलाएर चरमसुख लुट्ने गर्दछन्।
४ चम्चा आसनः महिलाको शरीरमा पछाडिबाट पुरुष चम्चा जस्तै खप्टीएर सम्भोग गरिने यो आसनमा सरल तथा सजिलो हुन्छ । यो आसनमा पुरुषको यौन क्षमता बढ्छ र सम्भोगको समय बढ्छ । महिलाले यो आसनमा पुरुषबाट केही फोहोरी व्यवहारको आशा गर्ने गर्दछन्।
५ उठेर गर्ने आसनः कहिलेकाही महिला सम्भोगको समयमा खाटबाट उफ्रने र उठेर गर्न मन पराउंछन् । यो आसनमा महिला उठेर नै पुरुषबाट आफुलाई सम्भोग गराउन चाहन्छन् । यो आसन अन्र्तगत सामान्यतया महिलाहरु डायनिङ टेबुलमा सम्भोग गर्न रुचाउंछन् । महिला साथीको यौन सुखको बारेमा आजै ध्यान दिनुहोस र आफ्नो दाम्पत्य जिवन सुखमय बनाउनुहोस । एजेन्सी
महिला मानव अधिकार संजालको नेतृत्वमा भण्डारी